थाहापाउनुहोस् प्रेममा सफल हुन नसकेका यी नेपाली अभिनेत्रीहरु ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
२६ मंसिर २०७७, शुक्रबार ००:००
प्रेम विना कोही मानिस बाच्न सक्दैन र पे्रम विना मानिसको जीवन नै अस्तव्यस्त बनिरहेको हुन्छ । भनिन्छ मायाँले नै संसार चलेको हुन्छ यदि मायाँ भएन भने यो संसारको अस्तीत्वनै सकिन जान्छ भनेर तर कहिलेकाही यहि मायाँको कारणले यो समाजमा धेरै घटनाहरु घटेको पनि हामीले देख्न र सुन्न सकिन्छ ।
प्रमेका प्रकार पनि धेरै खाले हुने गर्छ हामीले परिवारलाई गर्ने प्रेम र साथीलाई गर्ने प्रेम छुटै हुने गर्छ । साच्ची आफ्नो मनपरेको मानिसलाई गर्ने प्रेमको त झनै अरकै खालको आकर्षण हुने गर्छ किन भने जव कोहि प्रेममा प्रर्छ आफ्नो प्रेमीलाई संसार सोच्ने गर्छ र उसले संसारका सबै खुसी दिन तयार हुने गर्छ यति हुदाँ हुदैँ पनि कहिलेकाही त्यही आफूले संसार सोचेको प्रेमीबाट टाढा भएर विछोडको पिडा भोग्न बाध्ये हुन्छन् प्रेमी जोडिहरु र उनिहरुको सुनौलो सपना पलभरमै टुटेर टुक्रिएको हुन्छ ।
आज हामी तपाईसँग नेपाली अभिनेत्रीको छुटेको प्रेमको बारेमा चर्चा गर्न गहिरहेका छौ । भनिन्छ पहिलो प्रेम कहिले पनि भुल्न सकिन्न। तर धेरै मानिस पहिलो प्रेम पाउन सफल पनि हुँदैनन्।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका नायिका उनीहरुको चलचित्रका कारण मात्र चर्चामा रहँदैनन्। उनीहरुको प्रेम जीवनको बारेमा पनि निकै चर्चा हुने गर्छ। यस्तोमा, नेपाली सिनेमा पनि केहि यस्ता नायिका पनि छन् जो प्रेममा असफल रहे‘
मलिना र नायक अनुप विक्रम शाहि बीच प्रेम सम्बन्ध रहको र उक्त सम्बन्ध धेरै समय टिक्न नसकेको बताइन्छ।२०११ को मिस नेपाल मलिना जोशी पनि प्रेममा सफल रहिनन्। खासै चर्चामा नआएको यो जोडीको बारेमा कुरा गर्दै मलिनाले आफू र नौप बीच कुनै सम्बन्ध नरहेको पनि बताइन्।
पछिल्लो समय चलचित्रमा खासै देखा नपरेकी निता र आमेश भण्डारीको प्रेम निकै चर्चामा थियो। तर केहि समय अगाडी मात्र उनीहरु बीचको ४ वर्षीय प्रेम सम्बन्ध टुट्यो।
कुनै समय नेपली चलचित्र क्षेत्रमा निकै चर्चा कमाएकी नायिका सुष्मा कार्की पनि असफल प्रेमीमा पर्छिन्। सुष्मा र निरन शाही एक समयमा प्रेममा थिए भन्ने चर्चा थियो। सुष्माले आफ्नो शरीरमा निरनको ट्याटु समेत बनाएकी थिइन् भन्ने गरिन्छ। तीन वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि
नेपालकी सबैभन्दा रुचाइएकी नायिकामा पर्छिन् नम्रता। रेमनदास श्रेष्ठसँग उनको प्रेम रहेको भएपनि उनीहरुबीचको प्रेम पनि सफल हुन सकेन। त्यसपछि, उनी स्टीभ दावा शेर्पासँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको पनि बताइन्छ।
प्रकाशित मिति: Dec 11, 2020
नेपाल चलचित्र कलाकार संघले आउदो साधारण सभामा कोभिड-१९ तथा लकडाउनको बिसेष परिस्थितिमा अहोरात्र खटेर कलाकार,
दुलाहा बन्दै मनोज गजुरेल !
हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले दोस्रो बिहे गर्ने गरी तयारीमा लागेका छन् । ‘बिहे गर्ने हो
नायिका स्वेता खड्का विवाह बन्धनमा बाँधिइन् (हेर्नुहोस् तस्बिरहरु)
नेपाली सिने क्षेत्रकी चर्चीत नायिका स्वेता खड्का आज विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन्। यो स्वेताको दोस्रो
मेरो आँखामा आँशु मात्र हेर्न चाहने व्यक्तिलाई मेरो बिहेको निर्णयले पोल्नेछ :श्वेता खड्का
नेपाली सिनेमाकी चर्ची अभिनेत्री श्वेता खड्काले आज दोस्रो पटक लगनगाँठो कस्दैँ छिन् ।उनको पहिलो विवाह
नायिका श्वेता खड्काले मङ्सिर २२ गते दोस्रो विवाह गर्दै
नेपाली सिनेक्षेत्री चर्चीत नायिका श्वेता खड्काले यहि मङ्सिर २२ गते विवाह गर्ने पक्का भएको छ